အလှူအတန်းလုပ်ရင်းပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ အောင်လ နဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့ရဲ့ပီတိ | Duwun
သူတို့ရဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြလာပါတယ်။
အောင်လနဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးက နှစ်သစ်ကူးအလှူကို အတူတကွ လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် သူတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ လက်ရှိအချစ်ရေးအကြောင်းကိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြလာပါတယ်.
အောင်လနဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့ဟာ နှစ်ဦးအလှူအဖြစ် အတူတကွ လှူဒါန်းခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိမှာ သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းကလည်း အရမ်းကို ကြည်နူးပျော်ရွှင်နေရတယ်လို့လည်း ရင်ဖွင့်ပြောပြထားပါတယ်။
''ဘဝတစ်လျောက်လုံး ကိုယ့်ချွေးနဲစာနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ဘူးခဲ့သမျှ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲက ဒီတစ်ခါ နှစ်ယောက်အတူ စိတ်တူကိုယ်တူ ကြိုးစား ရှာဖွေပြီး တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ ရခဲ့တဲ့အရာက ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုပါပဲ နှစ်သစ်မှာ ဝိုင်းစုတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ နှစ်ဦးအလှူ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်''လို့ ဆိုပါတယ်။
အောင်လ နဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း တို့ဟာ အခက်အခဲ၊ အတိုက်အခိုက်တွေ ကြားထဲက လက်တွဲလာခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူ နှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း သူတို့ ချစ်သူ နှစ်ဦးဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ် မိသားစုဘဝကို တည်ဆောက်ချင်တယ်လို့ ဒီဇင်ဘာလ ၂ရက်နေ့ ည ၁၀နာရီခွဲက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
''အခုလက်ရှိအချိန်မှာ ဝိုင်းစု အရမ်းပျော်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်ကန်တယ်ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း ပိုပို သိလာရတယ်။ အဲ့ဒီ အတွက်လည်း ရင်ထဲက အစစ်အမှန်လာတဲ့ မေတ္တာစစ်တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 'ကို' ဝိုင်းစုတို့ နှစ်ယောက်အတွက် အရေးအကြီးဆုံးက ငွေကြေးဥစ္စာ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ ဘဝလက်တွဲဖေါ်နဲ့ သာယာအေးချမ်းတဲ့ မိသားစု ဘဝကိုပဲ တည်ဆောက်ချင်တာပါ။ အဲ့ဒီဘဝကို အခုပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့ အတွက်လည်း ပီတိဖြစ်တယ်'' လို့ ဆိုပါတယ်။
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ဟာ သူမလျှောက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့ဘဝ အတွေ့အကြုံကိုလည်း အခုလို ရင်ဖွင့်ပြောပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ အတောအတွင်းမှာလည်း မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။
''ဘဝမှာ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေရှိသလို မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ရွေးချယ်မှုတွေလည်း ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ကိုယ်ရည်သွေးပြီး နောက်ကွယ်မှာပြောနေပါစေ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ဝိုင်းစုရဲ့ ရပ်တည်မှု, ဖြစ်တည်မှုတွေ အားလုံးက ဘယ်သူ့ အထောက်အပံ့မှ မယူပဲ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ပြီး ရခဲ့တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်သန့် တယ်ပြောရရင်တော့ ဘဝတစ်လျောက်လုံးမှာ ကိုယ်ကပဲ ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေချည်းပါပဲ။ ပေးဆပ်ခဲ့ ရတာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ရလဒ်တော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ခုနှစ်တွေမှာပြန်မရခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ'' လို့ ဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။